विश्वका गरिव देशहरूको सूचीमा दोश्रो रोल नं. भएका हामी नेपालीका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालिन परिस्थितीमा तल उल्लेख गरे बमोजिम तलब भत्ताको सुविधा लिँदा रहेछन ।
चिनका राष्ट्रपतिले भन्दा २,४२६ गुणाबढि रकम
भारतीय राष्ट्रपतिले भन्दा ३१८ गुणाबढि रकम
बेलायतका राष्ट्रपतिले भन्दा १५ गुणा बढि र अमेरिका राष्ट्रपतिले भन्दा १० गुणा बढि रकम
राजाका हैसियतमा उनले तत्कालिन अवस्थामा बार्षिक रू. ६१ करोड ९१ लाख लिने गर्दथे । आफ्नो ६ सदस्यीय परिवारका लागि उनले सन् २००३ देखि २००५ को ३ वर्षको अवधीमा १ अरब ६ करोड ४५ लाख रकम राज्यको ढुकुटीबाट लिएका थिए । त्यति छोटो अवधीमा त्यत्रो रकम लिने राजालार्इ पालिरहेका हामी नेपालीका टाउकोमा टेकेका ज्ञानेन्द्रलार्इ ६२\_६३ गुराँश आन्दोलनले बढार्यो । तर साधारण नागरिकको हैसियतमा रहेका भनिएका उनलार्इ अझै राज्यले विशेष सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । यो सब हाम्रा निकम्मा नेताहरूले गरिरहेछन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसरी हामीले हाम्रा ढुकुटी रित्याएका ज्ञानेन्द्रलार्इ त हटायौं तर अझै खास उद्देश्यका लागि निर्वाचित गरि पठाइएका छोटे राजाहरूलार्इ पनि हटाउनु पर्ने अवस्था आएको हो कि ? भन्ने लागेको छ । अब तल हेर्नुस हाम्रा सभासदहरूले तलब\_भत्ता सुविधा वापत मासिक रूपमा बुझ्ने रकमः
पारिश्रमीक २६,११० (एक आम नेपालीको मासिक औसत आय ३ हजार नेपाली रूपैयाँ भन्दा कम छ ।)
धारा बिजुली १२००
नीजिसहायकः शाखा अधिकृतको शुरूको तलब अर्थात १५ हजार नेपाली रूपैयाँ
(लगभग सबैजसोले नीजि सहायकका रूपमा आफ्ना नातेदार वा पार्टीका कार्यकर्ता राखेका छन ।)
५ सदस्यीय एक आम नेपाली नागरिकको परिवारले मासिक औसतमा खर्च गर्ने रकम भन्दा बढी रकम उनीहरूका आलिशान फ्ल्याटमा खर्च हुँदो रहिछ । न उद्देश्य अनुरूपको काम गरेका छन न जनताका पीर बुझेका छन् । त्यसैले त भन्न मन लाग्छ मलार्इ, १ जना राजा त फाल्यौं तर ६०० भन्दा बढी छोटे राजाहरू पालिरहेका छौं । नेता जनताका दास हुन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर हाम्रो देशमा यसको ठीक उल्टो नेताहरू जनताका मालिक बन्ने प्रचलन बढ्दो छ ।
संविधान सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित तथा समानुपातिकबाट निर्वाचित ६०१ सभासदहरूले पछिल्लो २९ महिनामा देशको ढुकुटीबाट करिब १ अरब ४ करोड ५७ लाख ४० हजार भन्दाबढी रकम खर्च गरिसकेका छन् । यसमा मन्त्री भए बापत मन्त्रीहरूले पाउने गरेको तलब तथा भत्ता सुविधा समावेश गरिएको छैन । कम्तिमा पनि एक जना मन्त्रीले १ लाख भन्दा बढीको सुविधा लिने गर्दछ । तपाइँहरू अनुमान लगाउनुस् कहिल्यै सानो मन्त्रीमण्डल नहुने हाम्रो देशमा तिनले कति राजस्व भुत्याउछन् होला ।
संविधानसभाको म्याद अवधी १ वर्ष थप गरेको पनि ४ महिना बितिसक्यो, अब बाँकी ८ महिना मात्र बाँकी छ । अबको ८ महिनामा पनि यिनले संविधान बनाउन सकेनन भने यी खार्इदेउ राष्ट्रघातीहरूलार्इ हामी सारा देशभक्त नेपालीहरू मिलेर काकडभिट्टा पारी लखेट्नु पर्दछ । र, साँच्चीकै देशलार्इ माया गर्नेहरूको खोजी गरी राज्य संचालनको जिम्मा लगाउनु पर्दछ । जय देश । जय जनता ।